Filoham-pirenena : Namita iraka any ivelany -
AccueilSongandinaFiloham-pirenena : Namita iraka any ivelany
Filoham-pirenena : Namita iraka any ivelany
Solontenan’ny firenena malagasy amin’ny sehatra rehetra atrehiny ny Filoham-pirenena. Araka izany, efa voafaritra hatramin’ny fiandohan’ny taona ny fandaharam-potoan’ny filoham-pirenena amin’ireo fitsidihana samihafa ataony, na eto an-toerana na any ivelany. Amin’izao fotoana dia manao fivahinianana any ivelany, nanomboka ny alakamisy 19 avrily teo, ary haharitra hatramin’ny alahady 22 avrily izao ny Filoham-pirenena malagasy, Hery Rajaonarimampianina. Tsy nitsoaka araka ny finiavan’ny olona sasany manely vaovao tsy marina araka izany ny Filoham-pirenena, ary tsy niafina na nafenina ny niaingany teto Madagasikara fa tamin’ny fomba mazava, ary niaraka tamin’ireo mpandeha marobe tamin’ny zotra iraisam-pirenena.
Tsy manana ahiahy amin’izay zava-mitranga vokatry ny kilalao politika eto an-toerana araka izany ny Filoham-pirenena. Antony tsy nanovany ny fandaharam-potoanany izay efa voafaritra mialoha. Raha misy tokoa ny ahiahy na tahotra ny Filoha, dia azony natao ny nanafoana na nampihemotra ny diany toa izay efa nataony ny taona 2015, raha nalaza teny amin’ny antenimieram-pirenena ny fametrahana fitsipaham-pitokisana ny Filoha. Tamin’io fotoana io dia nofoanany ny fivahinianana ara-panjakana tokony nataony tany Japon.
Porofo izao fa manana fitokisana amin’ireo mpiara-miasa aminy sy amin’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta ny filoha, izay efa nametraka amin’izy ireo ny fitantanana ny raharaham-pirenena.